Linux Kubva kuScratch 8, vhezheni itsva yekuparadzira kwekare | Linux Vakapindwa muropa
Linux Kubva kuScratch 8, vhezheni itsva yekuparadzira kwekare
Imwe yemapurojekiti anodikanwa kwazvo pasirese Gnu / Linux yakagadziriswa. Linux Kubva kuScratch yasvika vhezheni yechisere, vhezheni ichatibatsira kugadzira yakagadziridzwa uye yakagadzikana kugovera kweGnu / Linux kana zvichibvira, zvese pasina inozivikanwa systemd.
LFS kana BLFS mapurojekiti anoitirwa kubatsira mushandisi kugadzira iyo Gnu / Linux kugovera kubva pakutanga kwake. Nekudaro, pamusoro pemaraibhurari uye macomputer, LFS 8 inovandudza magwaro anotungamira pamwe nemanyorerwo akawanda anoshandiswa kuumbiridza uye kugadzira kugovera.
Pakazara pane kutaura nezve anopfuura mazana manomwe mapakeji uye mafaera akagadziridzwa uye akachinjwa neiyi yekuvandudza. Izvi zvinogadziridza zvinosanganisira mapakeji akadai seGCC ayo akagadziridzwa kuita vhezheni 6.2.0, Glibc kune vhezheni 2.24 kana binutils kune vhezheni 2.27.
Linux Kubva kuScratch 8 inogadziridza kwete chete maraibhurari ayo asiwo nzira iyo yakavakwa
Zvakakodzera kutaura panguva ino shanduko dzakaitwa muLinux Kubva kuScratch 8 yakanangana neLib yekufananidza chinongedzo, chinongedzo chakashandurwa kuita lib64, saka sisitimu yakanangana nekuvakwa kwe64-bit. Chimwe chinongedzo chakachinjwa, mune ino nyaya chakaremara, ndi / usr/bin/ld.gold, chinongedzo chisingazogoneswizve uye chinoita kuti hupenyu huve nyore kune vashandisi vazhinji vanoshuvira kushandisa chirongwa ichi.
Kune akawanda mapurojekiti akavakirwa paLFS kana BLFS saka zvinotarisirwa kuti mushure meichi chigadziriso, mamwe mapurojekiti ane mukurumbira achatevera iyi yekuvandudza. Kutaura one, gNewSense, iyo inozivikanwa kugoverwa kweGNU kunoenderana neiyi purojekiti. Asi kune zvimwe zvakagoverwa zvinotevera chirongwa ichi.
Kana iwe uchifarira kugoverwa uku kana kushandisa chirongwa ichi kune ako mapurojekiti, in Iyi link Iwe hausi kuzowana chete yazvino vhezheni yeLinux kubva kuScratch asiwo neruzivo rwese kuti ugadzire yako wega kugovera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Linux Kubva kuScratch 8, vhezheni itsva yekuparadzira kwekare
Sei usingamboise zvinongedzo zve software iwe yaunotaura? Tese tinogona kutsvaga internet, asi zvaizobatsira :)